NepalPatra Blog - Nepal's First 100% trusted onlne news
विश्व स्वस्थ्य संगठनको अनुसार एघार वर्षदेखि उन्नाइस वर्षको अवधीलाई किशोरावस्था भनिन्छ । यो समय धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो । शारीरिक मानसिक र भावनात्मक रूपमा तिव्ररूपमा विकास हुने गर्दछ । जीवनकै जटिल समय भन्न सकिन्छ । त्यसकारण आमाबाबुले बिशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यो समयमा आएको परिवर्तन नबुझिदिएर उनीहरु बाटो बिराउन पुगेका छन् । अहिले त झन् […]
किन जातीय छुवाछुत अझै कायम छ ?
सबै मानव जातिको शरीरमा त्यही रगत नै हुन्छ । शारीरिक अंग देखि लिएर बनावट पनि एउटै हुन्छ । त्यही समाजमा त्यही नेपाली भूमिमा जन्मिएका हामि सबै नेपाली हौँ । त्यही नेपाली भूमिमा रातदिन काम गर्दै त्यही परिश्रमवाट खाने हामी नेपलीहरु र यो फलानो जात त्यो तल्लो स्तरको जात भनेर हामी नेपलीहरु नै हो । त्यही […]
जननी जन्म भुमिश्च स्वर्गादपि गरियसी !! ‘मातृ देवो भव’ भनेर हामीलाई हाम्रो सनातन धर्मले सिकाएको छ । ‘तिमी मलाई असल आमा देउ, म तिमीलाई राज्य दिन्छु’, नेपोलियन बोनापार्टको यही वाणी काफी छ आमाको महिमा बुझ्नको लागि । अन्ध्यारो रात उज्यालो पार्ने आकाशमा जुन छ । स्वोर्ग भन्दा पनि माथि आमाको ठाउँ हुन्छ ।। आज मातातीर्थ […]
शिक्षा मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो । कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई पनि शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि कुनै उमेर, जात, लिङ्ग, धर्म संस्कारले छेक्न सक्दैन । मानिसले जन्मदेखि चिहानसम्म शिक्षा हासिल गरिरहेको हुन्छ । पूर्णरुपले कसैले कहिले पनि शिक्षा ग्रहण गरेको हुदैन । शिक्षाकै कारण नै यो संसार छ । […]